Amụma nzuzo & kuki - zuru ike na obodo ọkụ
Lectnakọta na Iji Nkeonwe Gị
Tekinoloji Nyocha na Kuki
Iji Data Nke Onwe Gị
Njide nke Ozi Nkeonwe Gị
Nyefee nke Ozi Nkeonwe Gị
Ngosipụta nke Ozi Nkeonwe Gị
Iwu ndị ọzọ achọrọ
Nchekwa Nkeonwe Banyere Gị
Ozi zuru ezu na nhazi nke Ozi Nkeonwe Gị
Emelitere ikpeazụ: February 21, 2020
Amụma nzuzo a na-akọwa iwu na usoro anyị gbasara nnakọta, ojiji na ngosipụta nke ozi gị mgbe ijiri Ọrụ ahụ wee gwa gị gbasara ikike nzuzo gị yana otu iwu si echebe gị.
Anyị na-eji data nkeonwe gị iji nye ma melite Ọrụ ahụ. Site n'iji Ọrụ ahụ, agree kwenyere na nchịkọta na ojiji nke ozi dịka Usoro Nzuzo a.
Okwu nke edeputara leta mbu ya nwere nke putara n'okpuru onodu ndia.
Nkọwa ndị a ga-enwe otu ihe agbanyeghị na ha pụtara na otu ma ọ bụ na ọtụtụ.
Maka ebumnuche nke Iwu Nzuzo a:
Company (nke a na-akpọ ma "Ụlọ ọrụ", "Anyị", "Anyị" ma ọ bụ "Anyị" na nkwekọrịta a) na-ezo aka na phil-a-phuket.com.
akaụntụ putara ihe puru iche nke emeputara Gi iji banye na aka oru anyi ma obu aka ya.
Weebụsaịtị na-ezo aka na phil-a-phuket.com, nke sitere na https://phil-a-phuket.com
Country na -ezo aka: Pakistan
Onye na-enye ọrụ pụtara mmadụ ọ bụla sitere n'okike ma ọ bụ onye iwu kwadoro na-ahazi data ahụ n'aha ụlọ ọrụ. Ọ na-ezo aka na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ iji mee ka Ọrụ ahụ dị mfe, iji nye Ọrụ ahụ n'aha thelọ Ọrụ ahụ, ịrụ ọrụ metụtara Ọrụ ahụ ma ọ bụ nyere aka na Companylọ Ọrụ ahụ na-enyocha otu esi eji Ọrụ ahụ.
Ndị ọrụ Social Media nke atọ na-ezo aka na weebụsaịtị ọ bụla ma ọ bụ weebụsaịtị netwọkụ mmekọrịta ọ bụla nke Onye ọrụ nwere ike banye ma ọ bụ mepụta akaụntụ iji rụọ ọrụ.
Data nkeonwe bu ozi obula nke metụtara onye achoputara ma obu nke amata.
Cookies bụ obere faịlụ etinyebere na kọmputa gị, ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla ọzọ site na weebụsaịtị, nwere nkọwa nke akụkọ nchọgharị gị na weebụsaịtị ahụ n'etiti ọtụtụ ojiji.
Njikwa ejiji na-ezo aka na data anakọtara na akpaghị aka, site na ojiji nke Ọrụ ma ọ bụ site na ihe nweta Ọrụ n'onwe ya (dịka ọmụmaatụ, oge nleta peeji.)
Mgbe ị na-eji ọrụ anyị, anyị nwere ike ịrịọ Gị ka ị nye anyị ụfọdụ ozi njirimara mara nke enwere ike iji kpọtụrụ ma ọ bụ mata gị. Ozi amata nke onwe nwere ike ịgụnye, mana ọnweghị ọnye:
A na-anakọta data ojiji na-akpaghị aka mgbe ị na-eji Ọrụ ahụ.
Ojiji data nwere ike ịgụnye ozi dịka adreesị Ntanetị Yourntanetị nke Ngwaọrụ gị (dịka adreesị IP), ụdị ihe nchọgharị, ụdị ihe nchọgharị, ibe nke Ọrụ anyị ị gara, oge na ụbọchị nke ọbịbịa Gị, oge ejiri na ibe ndị ahụ, ngwaọrụ pụrụ iche. ihe nchọpụta na data nyocha ndị ọzọ.
Mgbe ị nwetara Ọrụ ahụ site na ma ọ bụ site na ngwaọrụ mkpanaka, Anyị nwere ike ịnakọta ụfọdụ ozi na-akpaghị aka, gụnyere, mana na ọnweghị oke, ụdị ngwaọrụ mkpanaaka ị na-eji, NJ ngwaọrụ mkpanaka gị pụrụ iche, Adreesị IP nke ngwaọrụ mkpanaka gị, Ekwentị mkpanaka gị. sistemụ arụmọrụ, ụdị ihe nchọgharị Internetntanetị nke ị na-eji, ndị na-achọpụta ngwaọrụ pụrụ iche na data nchọpụta ndị ọzọ.
Anyị nwekwara ike ịnakọta ozi nke ihe nchọgharị gị na-eziga mgbe ọ bụla visit gara Ọrụ anyị ma ọ bụ mgbe accessnweta Ọrụ ahụ ma ọ bụ site na ekwentị mkpanaaka.
Anyị na-eji kuki na teknụzụ ọchụchọ ndị yiri ya iji soro ọrụ na Ọrụ anyị ma chekwaa ụfọdụ ozi. Teknụzụ ntanetị ejirila mgbama, mkpado, na edemede iji nakọta ma soro ozi na iji melite ma nyochaa ọrụ anyị.
Can nwere ike ịkụziri ihe nchọgharị gị ka ọ jụ kuki niile ma ọ bụ gosi mgbe a na-eziga kuki. Agbanyeghị, ọ bụrụ na accept nabataghị kuki, may gaghị enwe ike iji akụkụ ụfọdụ nke Ọrụ anyị.
Kuki nwere ike ịbụ kuki “na-adịgide adịgide” ma ọ bụ “oge”. Kuki na-adịgide adịgide na-adịgide na kọmputa gị ma ọ bụ na ekwentị mkpanaaka gị mgbe go na-apụghị n'ịntanetị, ebe a na-ehichapụ Kuki Oge Oge ozugbo ị mechiri ihe nchọgharị weebụ gị.
Anyị na-eji nnọkọ abụọ na nnọchi anya kuki maka ebumnuche edepụtara:
Kuki dị mkpa / dị mkpaDị: Cookies Oge Nchịkwa Nke Anyị Na-eduzi: Nzube: Usio Kuki ndị a dị mkpa iji nye gị ọrụ dị na weebụsaịtị wee nyere gị aka iji ụfọdụ atụmatụ ya. Ha na-enyere aka nyochaa ndị ọrụ yana gbochie iji akaụntụ akaụntụ eme ihe n'ụzọ aghụghọ. Enweghị Kuki ndị a, a gaghị enye ọrụ ị rịọrọ maka ya, naanị anyị na-eji Kuki ndị a enye gị ọrụ ndị ahụ.
Nri kuki / Mara ọkwa CookiesDị: Kuki na-adịgide adịgide Ntuziaka site na: UsNzube: Kuki ndị a na-achọpụta ma ọ bụrụ na ndị ọrụ anabatala ojiji kuki na weebụsaịtị.
Kuki na-arụ ọrụPịnye: Kuki Na-adịgide Adịgide: Nzube Anyị: Nchịkọta ndị a na-enye anyị ohere icheta nhọrọ make na-eme mgbe ị na-eji weebụsaịtị, dị ka icheta nbanye nbanye gị ma ọ bụ mmasị asụsụ. Ebumnuche nke Kuki ndị a bụ iji nye gị ahụmịhe nke onwe gị na izere You ga-abanyeghachi mmasị gị oge ọ bụla You na-eji weebụsaịtị.
Kuki nyocha na ịrụ ọrụPịnye: Kuki na-adịgide Ozi anakọtara site na kuki ndị a nwere ike mata gị ozugbo ma ọ bụ n'ụzọ na -apụtachaghị ìhè dị ka onye ọbịa. Nke a bụ n'ihi na ozi anakọtara na -ejikọkarị na njirimara njirimara nke ejikọtara na ngwaọrụ ị na -eji abanye na weebụsaịtị. Anyị nwekwara ike iji kuki ndị a nwalee mgbasa ozi ọhụrụ, ibe, atụmatụ ma ọ bụ arụmọrụ ọhụrụ nke weebụsaịtị iji hụ ka ndị ọrụ anyị si emeghachi omume na ha.
Kuki ezubere iche na Mgbasa OziPịnye: Kuki na-adigideAkwadoro site na: Ndị otu atọ Ebumnuche: Kuki ndị a na-agbaso omume nchọgharị gị ka anyị nwee ike igosi mgbasa ozi nke nwere ike ịmasị gị. Kuki ndị a na -eji ozi gbasara akụkọ nchọgharị gị iji chịkọta gị na ndị ọrụ ndị ọzọ nwere otu mmasị. Dabere na ozi ahụ, yana site n'ikike anyị, ndị mgbasa ozi ndị ọzọ nwere ike idowe kuki iji mee ka ha nwee ike igosi mgbasa ozi nke anyị chere ga -adabara mmasị gị mgbe ị nọ na webụsaịtị ndị ọzọ.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara kuki anyị na-eji ya na nhọrọ gị gbasara kuki, biko gaa na Usoro Nuki anyị.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ike iji Data Nkeonwe maka ebumnuche ndị a:
Iji nye ma debe Ozi anyị, gụnyere inyocha ojiji nke Ọrụ anyị.
Ijikwa Akaụntụ Gị: ijikwa ndebanye aha gị dị ka onye ọrụ nke Ọrụ a. Ozi Nkeonwe You nyere nwere ike inye access nweta ọrụ dị iche iche nke Ọrụ dịịrị Gị dịka onye ọrụ.
Maka ịrụ ọrụ nke nkwekọrịta: mmepe, nkwanye na ọrụ nke nkwekọrịta ịzụta maka ngwaahịa, ihe ma ọ bụ ọrụ You zụrụ ma ọ bụ nke nkwekọrịta ọ bụla ọzọ n'aka anyị site na Ọrụ ahụ.
Ka ịkpọtụrụ Gị: Iji kpọtụrụ gị site na email, oku ekwentị, SMS, ma ọ bụ ụdị nkwukọrịta eletrọnik ndị ọzọ, dị ka ọkwa mkpanaka nke mkpanaka gbasara mmelite ma ọ bụ nkwukọrịta ozi metụtara ọrụ, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ nkwekọrịta, gụnyere mmelite nche, mgbe ọ dị mkpa ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya maka mmejuputa ha.
Iji nye gi site na ozi, onyinye pụrụ iche na ozi izugbe banyere ngwaahịa, ọrụ na ihe omume anyị anyị na-enye yiri nke ị zụtala ma ọ bụ jụọ ajụjụ gbasara belụsọ na ị họrọghị ịnweta ụdị ozi ahụ.
Ijikwa arịrịọ gị: Attendga ma jikwaa arịrịọ gị n’arụ anyị.
Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi nke gị n'ọnọdụ ndị a:
Na ndị na-enye ọrụ: Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi nkeonwe gị na ndị na-enye ọrụ iji nyochaa ma nyochaa ojiji nke Ọrụ anyị, iji gosipụta mgbasa ozi iji nyere gị aka ịkwado ma debe Ọrụ anyị, ịkpọtụrụ gị, iji kpọsaa na weebụsaịtị ndị ọzọ na gị mgbe ị gara Ọrụ anyị ma ọ bụ maka nhazi ịkwụ ụgwọ.
Maka mbufe azụmahịa: Anyị nwere ike kesaa ma ọ bụ bufee ozi nkeonwe gị na njikọta, ma ọ bụ n'oge mkparịta ụka nke, nkwekọrịta ọ bụla, ire akụ nke ụlọ ọrụ, ego, ma ọ bụ inweta ihe niile ma ọ bụ otu akụkụ nke azụmahịa anyị na ụlọ ọrụ ọzọ.
Na ndị mmekọ: Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi gị n'etiti ndị anyị na ha na-emekọrịta ihe, n'ọnọdụ nke anyị ga-achọ ndị mmekọ ndị ahụ ịsọpụrụ Iwu Nzuzo a. Mgbakwunye gụnyere ụlọ ọrụ nne na nna anyị na ndị enyemaka ọzọ, ndị ọrụ mmekọrịta ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ anyị na-achịkwa ma ọ bụ ndị anyị na Anyị na-ahụkarị.
Na ndị mmekọ azụmahịa: Anyị nwere ike kerịta ndị gị na ndị ahịa anyị ozi gị iji nye gị ụfọdụ ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ n'ọkwalite gị.
Mụ na ndị ọrụ ndị ọzọ: mgbe You na-ekekọrịta ozi nkeonwe ma ọ bụ na ndị ọzọ na-emekọrịta mmekọrịta na ọha na eze, ndị ọrụ niile nwere ike ịlele ozi dị otú ahụ ma nwee ike kesaa n'ihu ọha n'èzí. Ọ bụrụ na interact na-emekọ ihe na ndị ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ debanye aha site na Ọrụ Mgbasa Ozi Ndị Ọzọ nke Ndị Ọzọ, Ndị kọntaktị gị na Ndị Ọrụ Mgbasa Ozi Ndị Ọzọ nwere ike ịhụ seekpọ aha, profaịlụ, foto na nkọwa nke ọrụ gị. N'otu aka ahụ, ndị ọrụ ndị ọzọ ga-enwe ike ilele nkọwa nke ọrụ gị, gwa gị okwu ma lelee profaịlụ gị.
Thelọ ọrụ ahụ ga-ejigide Data nkeonwe gị naanị oge dị mkpa maka ebumnuche atọrọ na Nzuzo Nzuzo a. Anyị ga-ejigide ma jiri Data Nkeonwe gị ruo n'ókè dị mkpa iji rube isi n'iwu iwu anyị (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na achọrọ anyị ijigide data gị iji gbasoo iwu dị mkpa), dozie esemokwu, na ịmanye nkwekọrịta iwu na iwu anyị.
Companylọ ọrụ ahụ ga-ejigide ojiji data maka ebumnuche nyocha nke ime. A na-ejigide ojiji ojiji n'obere oge dị mkpirikpi, belụsọ mgbe ejiri data a iji wusie nchekwa ma ọ bụ aka arụ ọrụ nke Ọrụ Anyị, ma ọ bụ iwu na-enyere anyị aka ịnwe data a ruo ogologo oge.
A na-ahazi ozi gị, gụnyere Personal Data, na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke Companylọ Ọrụ na ebe ọ bụla ọzọ ndị ọrụ ahụ metụtara. Ọ pụtara na enwere ike ịfefe ozi a na - ma jigide na - kọmputa ndị dị na mpụga steeti gị, mpaghara, mba ma ọ bụ ikike gọọmentị ndị ọzọ ebe iwu nchekwa data nwere ike ịdị iche karịa ndị nke ikike gị.
Nkwenye gị na Iwu Nzuzo a na-esochi ntinye gị nke ụdị ozi na-anọchite anya nkwekọrịta gị maka mbufe a.
Companylọ ọrụ ahụ ga-agbaso usoro niile kwesiri ekwesi iji hụ na ejiri data gị na-echekwa echedoro yana dịka Iwu Nzuzo a si ghara ibugharị data Nkeonwe gị ga-aga na nzukọ ma ọ bụ obodo ọ gwụla ma enwere njikwa zuru oke ebe gụnyere nchekwa nke Gị data na ozi gbasara onwe gị.
Ọ bụrụ na Companylọ ọrụ ahụ na-etinye aka na njiko, nnweta ma ọ bụ ire ahịa, enwere ike bufee Data Nkeonwe gị. Anyị ga-enye ọkwa tupu ebugharị data nkeonwe gị wee banye n'okpuru Iwu Nzuzo dị iche.
N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịmanye ụlọ ọrụ ahụ iji gosipụta data nkeonwe gị ma ọ bụrụ na achọrọ ya ime nke iwu ma ọ bụ na nzaghachi maka arịrịọ ndị ọrụ ọha na-arịọ (dịka ụlọ ikpe ma ọ bụ ụlọ ọrụ gọọmentị).
Companylọ ọrụ ahụ nwere ike igosipụta data nkeonwe gị na ezigbo okwukwe kwenyere na omume dị mkpa maka:
Soro ọrụ iwu kwadoro
Chedo ma chedo ikike ma ọ bụ akụ nke ụlọ ọrụ ahụ
Gbochie ma obu nyochaa ihe ojoo nwere ike ime na oru
Chedo nchekwa nke ọrụ nke Ndị Ọrụ ma ọ bụ ọhaneze
Chedo iwu iwu
Nche nke data nkeonwe gị dị mkpa nye anyị, mana cheta na ọ nweghị usoro ntụgharị ntanetị na ntanetị, ma ọ bụ usoro nchekwa kọmputa enweghị nchekwa 100%. Ọ bụ ezie na anyị na-agba mbọ iji ụzọ nnabata maka azụmahịa iji kpuchido Data Nkeonwe gị, anyị enweghị ike ịdabere na nchekwa ya kpam kpam.
Ndị na-enye ọrụ nwere ohere ịbanye na Onwe Gị Nkeonwe naanị iji rụọ ọrụ ha na nnọchite anyị yana amanye anyị ịhapụ ịkọ ma ọ bụ jiri ya maka ebumnuche ọ bụla.
Ịkọ akụkọStatcounter bụ ngwa nyocha okporo ụzọ weebụ. Ị nwere ike gụọ amụma nzuzo maka Statcounter ebe a: https://statcounter.com/about/legal/
Anyị nwere ike iji ndị na-enye ọrụ igosi gị mgbasa ozi iji nyere aka kwado ma kwado Ọrụ anyị.
Mgbasa BingMgbasa ozi Bing bụ ọrụ mgbasa ozi nke Microsoft Inc. nyere. Ị nwere ike ịpụ na Mgbasa ozi Bing site na isoro ntuziaka dị na ibe ọpụpụ Mgbasa ozi Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-adsMaka ozi ndị ọzọ gbasara Mgbasa ozi Bing, biko gaa na amụma nzuzo ha: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement
Mgbasa ozi Ịdị n'otuỊdị n'otu nwere ike ịpụ na ọrụ mgbasa ozi Unity site n'ịgbaso ntuziaka dịka Unity Technologies kọwara na ibe Iwu Nzuzo ha: https://unity3d.com/legal/privacy-policyMaka ozi ndị ọzọ gbasara Unity Teknụzụ, biko gaa na Nzuzo Nzuzo Teknụzụ: https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Companylọ ọrụ ahụ na -eji ọrụ ire ahịa ọzọ iji kpọsaa gị na webụsaịtị ndị ọzọ mgbe ị gachara ọrụ anyị. Anyị na ndị na-ere ahịa nke atọ anyị na-eji kuki iji gwa, kwalite ma nye mgbasa ozi dabere na nleta gị gara aga na Ọrụ anyị.
Mgbasa ozi Mgbasa ozi BingỌrụ Microsoft na-enye mgbasa ozi mgbasa ozi Bing Microsoft Inc. Ị nwere ike ịpụ na mgbasa ozi dabere na mmasị Bing site na isoro ntuziaka ha: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-adsỊ nwere ike ịmụtakwu gbasara omume nzuzo na iwu nke Microsoft site na ịga na ibe amụma nzuzo ha: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement
AdRollSemantic Sugar, Inc. na-enye ọrụ remarketing, ị nwere ike ịpụ na ịre ahịa ahịa AdRoll site na ịga na ibe weebụ Mmasị Mgbasa Ozi a: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=falseMaka ozi ndị ọzọ gbasara omume nzuzo nke AdRoll, biko gaa na websaịtị amụma nzuzo AdRoll: http://www.adroll.com/about/privacy
Ọrụ anyị anaghị agwa onye ọ bụla na-erubeghị afọ 13. Anyị anaghị akpachara anya na-anakọta ozi gbasara onye ọ bụla na-erubeghị afọ iri na atọ. kpọtụrụ anyị. Ọ bụrụ na anyị achọpụta na anyị enwetara data nkeonwe n'aka onye ọ bụla na-erughi afọ 13 na-enweghị nkwenye nkwenye nne na nna, Anyị na-eme ihe iwepu ozi ahụ na sava anyị.
Anyị nwekwara ike belata otu anyị si anakọta, jiri, ma chekwaa ụfọdụ ozi nke ndị ọrụ n'etiti 13 na 18 afọ. Oge ụfọdụ, nke a pụtara na Anyị agaghị enwe ike ị nye ụfọdụ ndị ọrụ ụfọdụ ọrụ nke Ọrụ a.
Ọ bụrụ na Anyị kwesịrị ịdabere na nkwenye dị ka usoro iwu maka ịhazi ozi gị yana obodo gị chọrọ nkwenye n'aka nne na nna, Anyị nwere ike ịchọ nkwenye nke nne na nna gị tupu anyị anakọta ma jiri ozi ahụ.
Ọrụ anyị nwere ike ịnwe njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ na-adịghị arụ ọrụ n'aka anyị. Ọ bụrụ na on pịa njikọ ndị ọzọ, a ga-eduzi gị gaa na saịtị nke ndị ọzọ. Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị nyochaa amụma nzuzo nke saịtị ọ bụla ị gara.
Anyị nwere ike imelite Iwu Nzuzo anyị site n'oge ruo n'oge. Anyị ga-agwa gị maka mgbanwe ọ bụla site na biputere Iwu Nzuzo ọhụrụ na ibe a.
Anyị ga-eme ka know mara site na email na / ma ọ bụ ọkwa a ma ama na Ọrụ Anyị, tupu mgbanwe ahụ amalite ịdị irè ma melite ụbọchị "emelitere ikpeazụ" na elu nke amụma nzuzo a.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara amụma nzuzo a, ị nwere ike kpọtụrụ anyị.
Ndị Malaysia chọrọ visa na Netherlands?
Visa Schengen bụ iwu maka ụmụ amaala Malaysia niile nọ na ya
Afọ ole nwere ike ịga naanị Philippines?
Ụgbọ elu ụgbọ elu Philippines - Njem n'ime Philippines dị maka ụmụntakịrị na-esoghị
Kedu akụkụ nke Philippines?
Olee otú Philippines si bụrụ obodo a na-eji aka ekpe eme ihe. Taa bụ ihe dị mkpa maka Philippines
Kedu ihe na-akpata oge Filipino?
Miguel Bernad, onye dere edemede banyere oge Filipino n'akwụkwọ ya "Budhi: A
Azịza kachasị mma: Kedu mkpụrụ osisi na-akwadoghị na Thailand?
Nke a bụ ihe niile ịchọrọ ịma gbasara durian, mkpụrụ osisi a machibidoro iwu n'ụwa. Durian,
Kedu aha ụgbọ elu Thailand?
Ụgbọ elu ICAO IATA Thai AirAsia AIQ FD Thai AirAsia X TAX XJ Thai ọdụm
Ị jụrụ: A na-asụ Malay na Philippines?
Ajụjụ: Ụmụ nwanyị ole nọ na Laos?
Kedu olumba China ka a na-asụ na Cambodia?
Azịza ọsọ ọsọ: Ego ole bụ tiketi si Doha gaa Manila?
Azịza ngwa ngwa: Amachibidoro Netflix na Vietnam?
Vietnam Jasmine osikapa ọ dị mma?
Gịnị kpatara Indonesia ji eto ngwa ngwa?